Ayikho intsha eyisicefe eNew York | Izindaba Zokuhamba
Ayikho intsha enesithukuthezi eNew York
Phefumulela inkululeko namandla ENew York, idolobha elifanele ukuvakashelwa yintsha efuna ukuzijabulisa futhi imangazwe ukuheha kwayo.
isithombe isikweletu: UDavid Boyle eDDC
Okokuqala, i- IBig Apple, Igama elibhekisela eManhattan, liyakwamukela futhi liyajabula ukuba yisikhungo sebhizinisi nesobuciko edolobheni. Ukuhamba emigwaqweni yayo kuyathakazelisa, ngoba kungenzeka ukuhlangana nobuningi bezinhlanga ezihlala lapho.
isithombe isikweletu: UMatthias Rosenkranz
Intsha ethanda ama-movie ingazibonela mathupha amafilimu ayithandayo, ngihamba UFifth Avenue, Central Park, noma Times Square lapho kwaqoshwa khona ama-movie amaningi.
isithombe isikweletu: elwibe
Ukuqala umzila wethu wobusha sizovakashela i- Umnyuziyamu we-Lower East Side Tenement. Ziyizakhiwo ezakhiwe ngo-1863, ezigcina izimpahla futhi zihlonipha imizamo yabantu bokufika, abathi ngobunzima baqinisa iphupho laseMelika ngokuzinikela ekwenzeni izingubo. Muva nje ngo-Okthoba 2008, u-First Lady uLaura Bush unikeze i-Tenement iMedali Kazwelonke ngokuzibophezela kwayo ekusebenzeleni umphakathi kanye nokuqukethwe ngabantu. Ngaphandle kokungabaza, umnyuziyamu esingeke sawuphuthelwa.
isithombe isikweletu: ucludguess
Sizothola futhi Grand Central Terminal, ingcweti yobuciko yobunjiniyela bensizakalo yezitimela ezihamba ngaphansi, ohanjwa nsuku zonke yizinkulungwane zabantu. Ingamamitha angama-44 ukujula, amathrekhi angama-31 ezingeni eliphezulu nama-26 ezingeni eliphansi. Kanjani?
isithombe isikweletu: _ UDaniel Mayrit
Amasiko nezokuzijabulisa kwehluka ku-42nd Street ngaseTimes Square. Futhi ukuze uzitike kufanele ukhethe inkundla yemidlalo Broadway, nokwethulwa kwemisebenzi yizinkanyezi ezidumile. Amanani ehla enyuka phakathi kuka- $ 120 kuya ku- $ 30.
isithombe isikweletu: Amazulu Awayo
Umzila oya esiqhingini se Isifanekiso senkululeko ngeke lihlehliswe. Ngale njongo kunezinsizakalo zokuhamba ngezikebhe zama-yacht nezincane eManhattan waterfront. Emzileni ofanayo, insiza yamahhala yeStaten Island Ferry iyindlela yokubona isikhumbuzo esidumile nezinga lesiko laseNyakatho Melika kude; futhi njengoba umkhumbi mkhulu futhi unamazinga amaningi ungakwazi ukuhamba, ukujabulela umoya opholile bese wehla ngemuva kwemizuzu engama-25 ungene eStaten Island.
isithombe isikweletu: Ross2085
Ukuhlangana nososayensi, i-planetarium kanye nama-dinosaurs amakhulu kunikeza Museum of Umlando Wezemvelo. Intsha ejikeleza emigwaqweni yaseNew York kumele sondela eWorld Trade Center (iTwin Towers) engasasebenzi njengokukhombisa ukuthi udlame luholela kuphi, hlonipha inkumbulo yomuntu oshonile, futhi uqaphele ubuqhawe babatakuli.
isithombe isikweletu: ah-vimba ®
Ekugcineni, sikweluleka ukuthi ubheke iNew York City kusukela phezulu eMbusweni Wombuso okwathi eminyakeni embalwa edlule yathathwa njengesakhiwo eside kunazo zonke emhlabeni. Kokunye phansi kwayo kune-simulator yendiza exhunywe nokuqagela kwefilimu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » ENew York » Ayikho intsha enesithukuthezi eNew York
Ukuthenga kwezingane eNew York
Isitsha esijwayelekile esivela e-Albania